တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး - menus တွေ, ချက်ပြုတ်နည်းများ, အစားအသောက်များတွင်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ထိုသူငယ်အစာကျွေးဖို့အဘယ်သို့နည်း,
အများဆုံးအရသာနှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ - တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး
အောင်မြင်စွာမိတ်ဆက်ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးနို့တိုက်ကျွေးရေး၏ မိခင်ကလေး၏အစားအသောက်များတွင်အပေါ်မျိုးစုံဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရန်စတင်။ ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးတစ်နှစ်အကြာတွင်အသစ်တစ်ခုဇာတ်ကောင်ရရှိသည်။ အဆိုပါအစအနပြီးသားတစ်ဝက်ဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာထုတ်ကုန် replenishes သွား၏ သူတို့ကိုအစိုင်အခဲအစားအစာများဝါးနိုင်ပါတယ်အစားအစာ၏အုပ်ချုပ်ရေး mode နဲ့အကြိမ်ရေပြောင်းလဲနေတဲ့။
ကလေး၏ Masticatory ယန္တရားနှင့်အစာခြေစနစ်ကအဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးမသာထားရှိရေးပြည်နယ် puree တစ်ဦး Blender ပြင်ဆင်နေကြသည်သောထုတ်ကုန်များ, ဒါပေမယ့်လည်းခက်ရင်းခွနှင့်အတူ mashed သငျ့သညျ။ အဆိုပါပန်းကန်အစအနပြီးသားသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းလဲကျနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါနှောင့်အယှက် peristalsis ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစိုင်အခဲအစားအစာများ၏နိဒါန်းရဲ့အစနှောင့်နှေးစေရန်, အူနှင့်အစာအိမ်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
အသက် 1 နှစ်အကြာတွင်သားသမီးများ၏တစ်ဦးကအစားအစာကိုသင်အစားအစာစားသုံးမှု၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးငါးအချိန်ဖြစ်သင့်:
regularity - ကလေးနေ့တိုင်းတစ်ချိန်တည်းမှာတိုက်ကျွေးရန်လိုအပ်ပါသည်, ဒီတော့သူကောင်းတစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့်သွေဖည်ထက်ပိုမမိနစ် 30 ဖြစ်နိုင်သည်။
ပေါင်းအစအနအားလုံးကိုအစားအစာ, ပြုတ်သို့မဟုတ်ဖုတ်, stewed ။
လာမယ့်မုန့်ညက်နေတုန်းပဲအများကြီးဖြစ်ပါတယ်သည်အထိဆိအချိန်ကိုစားရန်လိုသည်များနှင့်ဆိုပါက, unsweetened လတ်ဆတ်တဲ့အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေးပါ။
အတော်များများကငယ်ရွယ်မိဘများညဉ့်ကိုတလျှောက်လုံးအိပ်အိပ်မက်မက်ဒါကြောင့်သူတို့ကလိုအပ်သောရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ် ညမှာကလေးအစာကျွေးဖို့ တစ်နှစ်အကြာတွင်။ အရာအားလုံးသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏, ထိုသူငယ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်မူတည်နှင့်အလေ့အထများကြောင့်ခြောအဖြေမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကျွမ်းကျင်သူများကထိုနေ့၏ဤအချိန်အပန်းဖြေ, မိခင်နှင့်အစအနမသာ, သို့ရာတွင်သူ၏အစာခြေစနစ်ကြောင့်နို့ဖြတ်တဲ့, ဆဲလိုအပ်သောကြောင်းသဘောတူသည်။
ရင်သားကင်ဆာအတွက်ထက်ပုလင်း-ကျွေးမွေးသည့်အခါညဥ့်မှာစားရန်ဆန္ဒအနေဖြင့်နို့ကွာသောကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ အဆင်ပြေအောင်ကြာကြာအရောအနှောကြေညက်ခြင်းနှင့်စုပ်ယူခန္ဓာကိုယ်ကလေးသည်အားဖြင့်၎င်း, မိခင်ရဲ့သားမြတ်ကိုလည်းသက်သာစေသောဆေးအံသွားဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာအိပ်ရာမသွားမီ feed ကိုကလေးကသူ့ကိုပင်ပန်းအပ်သဖြင့်, အစားကမ်းလှမ်းမှုကိုနွေးရေ, ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်အသီး compote အစာစားခြင်း။
နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများ: ပျော့ဒိန်ခဲ, ဒိန်ချဉ်, အချဉ်မုန့်။ ဒိန်ချဉ်, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်ဒိန်ချဉ်လည်းအစားအသောက်များတွင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီနှင့် seasoned လတ်ဆတ်တဲ့ရာသီအလိုက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။ ကုန်ပစ္စည်းများနိုက်ထရိတ်နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများဆံ့မခံသင့်ပါတယ်။
သကြားလုံး: marshmallows, သကြားလုံးများနှင့် Marmalade ။ သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနှင့်သေးငယ်တဲ့ပမာဏမိတ်ဆက်ကြသည်။
အနိမ့်အဆီငါးနှင့်အသားကလေး၏နေ့စဉ် Menu ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။
ကလေးစီရီရယ်, ဖျော်ရည်များနှင့်အသီးအပွအဖြစ်မရောက်မီဆိ menu က၌ရှိကြ၏။
တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏသာရှိတဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆက်သည်။ မိဘများနီးကပ်စွာ3ရက်များအတွက်ကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သည်။ အဆိုပါဓာတ်မတည်မရှိလျှင်, သစ်ကိုအစားအစာတိုး၏ပမာဏ။ သူငယ်၏အစားအသောက်များတွင်သတ္တုဓာတ်, ဗီတာမင်နှင့်အခြားအသုံးဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပြည့်နှက်ရပါမည်။ moms ပါဝါ၏အစအနအကြောင်းကိုအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရာအတွက်အစားအသောက်ဒိုင်ယာရီထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးမကြာခဏသင့်ရဲ့ကလေးကြိုက်နှစ်သက်သည်အဘယ်အရာကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သူကကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်မကြိုက်တယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလို့ငှာ, မိခင်ကွဲပြားခြားနားသောရက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး 10 ကြိမ် crumbs ကပူဇော်သင့်ပါတယ်။ အစားအစာအဆက်မပြတ်ငြင်းဆိုလျှင်, ထို့နောက်မလိုအပ်မယ့်ကုန်အံ့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မိဘအလားတူဖွဲ့စည်းမှု၏တစ်ဦးကိုအစားထိုးရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အိမ်တွင်းဒိန်ခဲကဲ့သို့အပရိုတိန်း၏နံပါတ်အတွက်ကြက်သား။
တစ်နှစ်အကြာတွင်ထိုသူငယ်၏အစားအသောက်များတွင်အရောအနှောများပါဝင်သည်ဆိုပါကတဖြည်းဖြည်းပြည့်စုံချုပ်ရာမှလျှော့ချ, သူတို့ထံမှငြင်းဆန်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ညဥ့်အခါကျန်းမာကလေးမဟုတ်တော့တိုက်ကျွေးရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်နံနက်ယံ၌နှိုးလို့မရပါဘူး, ဒါကြောင့်မိခင်ပုအစအနချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာညစာအစာကျွေးသင့်ကြောင်း, အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာရေတစ်ပုလင်းကိုဆက်ကပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်အပေါ်မှာလက်ကိုလှုပ်။
မိသားစုနို့တိုက်ကိုဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နှင့်အိပ်ပျော်နေသောနေစဉ်ကလေးနေဆဲအစာစားလျှင်, ထို့နောက်မေးခွန်းတစ်နှစ်အကြာတွင်ညဥ့်မှာကလေးအစာကျွေးဖို့ဘာပေါ်ပေါက်။ သငျသညျမှနျအစအနဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ် ရောမွှေ သွန်းလောင်းအတွက်အစားအစာသို့မဟုတ်အစားထိုးလိုက်ပါ။ နာမကျန်းသို့မဟုတ်အံသွား၏ကာလအတွင်းကလေးငယ်များနွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်အဘို့အထူးလိုအပ်ရှိသည်, သူတို့သုန်မှုန်ဖြစ်လာသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်တွင်မိခင်သူမ၏နို့နှင့်အတူကလေးဝေဒနာတွေနိုင်ပါတယ်။
သားသမီးရဲ့ဆရာဝန်များကတစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးများပါဝါတွက်ချက်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နှုန်းသည် 1300 kcal နှင့်အစားအစာစုစုပေါင်းငွေပမာဏကြောင်းကိုတွေ့ကြပြီ - အကြောင်းကို 1100 ml ။ ကလေးသူငယ်များခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်4နာရီဖြစ်ပါတယ်မုန့်ညက်ထိုးကြားကာလအကြား 4-5 ကြိမ်ကျွေးမွေး၏။ စစ်အစိုးရကများပါဝင်သည်သငျ့သညျ:
08:00 - ပထမဦးစွာနံနက်စာ - နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ရဲ့ 20%;
10:00 - နေ့လည်စာ - 10%;
12:00 - ညစာကအများဆုံးအာဟာရဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ် - 30%;
16:00 - နေ့လည်စာ - 15%;
20:00 - ညစာ - 25% ။
မိဘများအစားအစာဖြန့်ဖြူး table ၏တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေး၏အစားအစာအကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့တစ်ကီလိုဂရမ်အစအနလိုအပ်:
အဆီ -4ဂရမ်,
ဘိုဟိုက်ဒရိတ် - 16 ဂရမ်,
ပရိုတိန်း -4ဆ
တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး - menus တွေ, ချက်ပြုတ်နည်းများ
လူကြိုက်များမေးခွန်းများကိုသစ်ကိုတစ်နှစ်ပြီးနောက်ကလေးအစာကျွေးရန်မည်သို့မည်ပုံအကြောင်းကိုမိဘများ, မီနူးများနှင့်ချက်ပြုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတုံ့ပြန်ရန်ကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်မျှတသောအစားအစာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်သောကြောင်းဟုဆိုရပေမည်။ နေ့စဉ်ကလေးကိုစားသင့်ပါတယ်:
ပင်လယ်ငါးတွေ (Pollock သို့မဟုတ် hake) နှင့်အသား (အသည်း, နှလုံး, လျှာကို);
အခြောက်လှန်းအသီးအပွသို့မဟုတ်ရိုင်း၏ compote ထနှင့်ရေနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးသောက်;
တစ်နှစ်အကြာတွင်ကလေးတစ်ဦးအစာကျွေး - Menu ကို
အာဟာရများအတွက်ပြင်ဆင်မှု၏တစ်နှစ်အကြာတွင်သားသမီးတို့အဘို့ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်တဲ့အခါတစ်ဦး menu ကိုလမ်းညွှန်မှု:
ပထမဦးဆုံးနံနက်စာမှာပရိုတိန်းနဲ့ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်သင့်သည်။ ဆိတ်အချဉ်မုန့်မှကြက်ဥသို့မဟုတ်အနိမ့်အဆီအိမ်တွင်းဒိန်ခဲပြုတ်တစ်ဦး omelets, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသုပ်, နို့ယာဂုသို့မဟုတ်ဟင်းချိုချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။
နေ့လည်စာဘီစကွတ်နှင့်အတူအသီးသန့်စင်သောသို့မဟုတ် compote ရှိရေးလိမ့်မည်။ ဤနည်းကိုသင်နောက်တစ်နေ့မုန့်ညက်မတိုင်မီအစာအိမ်ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှုလှုံ့ဆော်ခြင်း။
ရေစာနို့, ဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ် kefir ရှိရေးလိမ့်မည်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များအတွက် cookies များကို, muffins, pancakes သို့မဟုတ် muffins ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပမာဏပါ။
ညစာဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ဆန်, mannyh, buckwheat သို့မဟုတ် oat ဂျုံယာဂု, ပြုတ်ခေါက်ဆွဲရှိရေးသငျ့သညျ။ အိပ်ရာမသွားမီဤကဲ့သို့သောဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ချဉ်မီးဖုတ်ထားသောနို့အဖြစ်တစ်ချဉ်နို့ထုတ်ကုန်ပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်နှစ်အကြာတွင်သားသမီးတို့အဘို့အစားအစာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မိမိအမိရန်သင့်ကလေးများအတွက် menu ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမကြာခဏမေးခွန်းအရသာရှိတဲ့ကျန်းမာပန်းကန်ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို, ပေါ်ပေါက်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်သားသမီးတို့အဘို့ချက်ပြုတ်နည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးသောသူတို့ကိုမစဉ်းစားပါ။
beetroot - 1 အပိုင်းအစ;
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နည်းနည်း (နေကြာသို့မဟုတ်သံလွင်ဆီ) - 0.5 လက်ဖက်ရည်ဇွန်း;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ;
, ပျမ်းမျှ beets ကိုယူလျှော်ပြုတ်။
ကြက်ဥ - 1 အပိုင်းအစ;
နို့ -2ဇွန်း,
ဆား - တစ်ဦးဖြစ်တော့။
ကြက်ဥ Beat, နို့ထည့်အတူတကွ whisk ။
ဟင်းချက်တဲ့ရေနွေးငွေ့ရေချိုးခန်းအပေါ်မီးဖိုသို့မဟုတ် multivarka အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသား (ယုန်, နွားငယ်သား) - 20 ဂရမ်,
မုန်လာဥနီ - 1 pc;
အာလူး - 2-3 အပိုင်းပိုင်း;
ရေ - 250 ml ကို။
အပြည့်အဝချက်ပြုတ်သည်အထိအကြောင်းကိုမိနစ် 40 အဘို့အကွတ်။
oat အလွှာ - 20 ဂရမ်,
ကလေးနို့ - 200 ml ကို;
Fructose -3ဂရမ်,
ထောပတ် -5ဂရမ်,
ဆား - တစ်ဦးဖြစ်တော့;
ရေ - 150 ml ကို။
ဒယ်အိုးထဲသို့ရေလောင်းပြီးဆူအောင်တည်ဆောင်ကြဉ်း, ထို့နောက် vsypte oat အလွှာပြီးတော့5မိနစ်အပူရန်။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် thickened ပြီးနောက်, သငျသညျနွေးနို့, fructose နှင့်ဆားကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်။
ဂျုံယာဂုဟင်းချက်ဆီကို add ပြီးတော့, 25 မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဧည့်ခံ, ကလေးအစားအစာစဉ်အတွင်း mom, အခြို့သောနို့တိုက်ကျွေးရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသင့်တယ်:
အကောင့်ထဲသို့ပါဝါ mode မှာသူငယ်၏အကွိုကျကိုယူပါ။
သောအဘို့ကိုအရွယ်အစား Watch ။
ဝါဂွမ်း discs တွေကိုထံမှခရစ္စမတ်လက်မှုပညာ
အဘယ်အရာကို2နှစ်ကလေးယောက်ျားလေးပေးရ?
ပျိုးခင်း Rhymes, ပျိုးခင်း Rhymes
မိန်းကလေးများအဘို့အဂိမ်းများ - ပဟေဠိ
ဒီမိသားစု၏မျိုးဗီဇအင်္ဂါရပ် 14 ကြိမ်မြောက်အချိန်အတွက်ပြသနှင့်လောကဓာတ်လုံးကိုတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား!
လိမ္မော်ရောင်ငံပြာရည်အတွက် duck ရင်သားကင်ဆာ
Beet ဖျော်ရည် - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် contraindications
အဆိုပါ cranberries စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?